28/02/2004: Submitted for publication via web
20-ka February oo markii ugu horeysay laga xusay magaalada London
by London (Jam) - from www.jamhuuriya.info
London (Jam)- Xaflad kooban oo lagu xusayay sannadguurada 22-naad ee ka soo wareegtay kacdoonkii dhagaxtuurka ee ardayda dugsiyada sare Hargeysa, ayaa lagu qabtay xaafada Wembley ee galbeedka London habeenimadii Sabtidii ee 21kii bishan February,2004. Haddaba waxa warbixintan nooga soo diray magaalada London C/xakiiim Maxamed Sheekh oo ah tifaftiraha wargeyska Jamhuuriya ee London. Kullankan oo ay ka soo qayb galeen qaar ka mid ah dhalliyaradii mutacalimiinta ahaa ee UFO iyo ardaydii dugsiyada ee wakhtigaa, ayaa waxa ugu horeyntii ereyo kooban oo soo dhawayn ah ka soo jeediyay Khadar Xasan Cali.
Intaas ka dibna waxa hadalkii la wareegay Axmed Muxumed Madar oo ka mid ahaa aqoonyahanadii UFO, isagoo ka waramaya muhiimada ay maalintani leedahay iyo sida ay ugu qalanto in la xasuustaa, waxaanu yidhi “ Ummada aan taariikhda lahayn dhibaato kama baxdo markaa waxay ahayd in maanta dad intan ka badan isku yimaadaan, laakiinse waa bilow wanaagasan. Maalintan anagu ma lihin ee waxa leh ardaydii naftooda u hureysay ee dhagaxa tuurayay iyo haweenkii. Xaqiiqadii waayeelku way baqdeen dharaartaa, hase yeeshee ardayda iyo haweenku way badheedheen”. Axmed waxa uu intaa ku daray in maalintani tahay tii halgankii SNM ciidamisay ee cududka u yeeshay, isla markaana daah furtay cadaawadii ciidankii Siyaad Barre.
Waxa isagu hadalo kooban oo munaasabada ku saabsan ka soo jeediyay Aadan Warsame Siciid oo isna ka mid ahaa UFO (Hargeisa Group). Aadan waxa uu ka waramay in aan halganka dadka reer Somaliland maalintaas bilaabmin, balse uu soo taxnaa tan iyo intii inqilaabtii 1961 saraakiisha reer Somaliland sameeyeen, kaasi oo oo buu yidhi muujinayo sida ay markiiba Somaliland uga hor yimaadeen cadaalad daradii ay walaaladooda Soomaaliyeed kula kaceen. Waxa kale oo uu ka waramay sida loogu baahan yahay in ay iskugu xidhmaan dad reer Somaliland ee dalkan boqortooyada Ingiriiska ku dhaqani oo sida uu sheegay beryahan danbe ay ka muuqato kala daadsanaan badani. Aadan waxa uu xusay sidii ay u bilaabeen hawlahoodii samofalka ahaa waxaanu yidhi “Waxaanu ka bilownay in aanu dadka isku soo dhawayno oo aanu isku soo ururino oo cabsida iyo shakiga laga saaro. Markaa bal intaynaan wax kale qaban a ynu is ururino oo is wada gaadhno si aynu wax u wada qabsano”.
Waxa isaguna halkaas ka hadlay xoghayaha maalliyada ee xisbiga Kulmiye Maxamed Cabdi Aadan Iskeerse oo ku bilaabay xusid uu xusay halgankii xorreynta dalka, isagoo yidhi “Waa laga sabrayaa kuwii dalkan nafootda u soo hurey kol haddii aynu helnay wixii aynu rabnay. Halgankii wuu socdaa waxa loo baahan yahay wacyi galin balaadhan, anagu xisbiga Kulmiye hadaanu nahay waxaaanu samaynay guddi aanu u xilsaarnay in ay taariikhda ururisa”. Md Iskeerse waxa uu intaas ku ladhay in aanu fileynba in la xuso maanta waayo buu yidhi waatii la yidhi yaan taariikhda la soo qaadin uu daadku maalin kasta soo saarayo; Yeeli mayno taariikhda yaan la xusin.
Mid ka mid ah ardaydii hormoodka ka ahayd dhagaxtuurka Maxamed Aar, ayaa isna maalintaas 20kii, Febr,2003, iyo sidii wax u dhaceen ka waramay. Waxaanu yidhi “ Kow iyo tobbankii duhurnimo ayaanu ka baxnay Dugsiga 26 Juun oo Faarax Oomaar tagnay ka dibna maxkamada oo oday yar oo booliska ahaa rasaasta nagu bilaabay. Maalintaas Afweyne wuxuu yidhi waar qori wax igagag qaada. Waxaan xasuustaa galabti markii la aasayay Barre Xaaji Cilmi Allah ha u naxariistee dhawr ruux ayaanu ku aasnay. Tani waxay noo suurtagalisay in ardaydu is bartaan oo isku xidhmaan waraaqo ayaanu qori jirnay aanu u diri jirnay dowladda oo aanu leenahay Maxamed Cali ayaa soo diray waayio isaga ayaanu ka naqaanay magaciisa SNM. Markii danbena waxaanu ku biirnayhalgankii hubeysnaa oo waxaanu u tagn ay 4-aad oo markaa Allah u ha naxariistee Maxamed Cali iyo Dhuxul haystaan”.
Xidhitaankii munaasabada ayaa waxa la isku dhaafsaday araa iyo dood ku saabsan sidii loo ururin lahaa maalmaha taariikhda Somaliland, isla markaana joogta ah looga xusi lahaa maalintan magaalada London sannad kasta. Gebo-gabadii xafladana waxa la magacaabay guddi farsamo oo ka shaqaysa sannad kasta sidii loo abaabuli laha xuska 20-ka February.
Dhagaxtuurkii maalintaas waxa ku geeriyooday Allah ha u naxariisteen Bare xaaji Cilmi oo ahaa arday dhiganayay fasalka 2aad ee dugsiga sare ee G/Libaax, waxaana ku dhaawacmay Illiyaas Qase Faarax, waxa isna maalin ka dib dhaawac soo gaadhay oo ay daaweyntiisu sahlanayd, hase yeeshee ciidamadii ka amar qaadanayay taliskii Siyaad Barre ka hor joogsadeen in wax dhaymo iyo dawooyina la siiyo u geeriyooday Xuseen Cabaase Axmed (Qawdhan) oo ahaa macalin shaqo qarana oo ka dhigi jiray dugsiga sare ee G/libaax.
Dhanka kalena waxa si aada loo soo dhaweeyay aqoonsiga maalintan loo aqoonsaday maalinta dhallinyarada Somaliland intii qabanqaabada xafladani socotay lagagag wadhadlay. Munaasabada xafladan waxa soo qabanqaabiyaya xubno firfircoon ka tirsan ururka qurba jooga reer Somaliland ee Somaliland Forum, waana markii ugu horeysay ee laga xuso meel dalka ka baxsan maalinta dhalliyarada Somaliland, waxaana ay qayb ka tahay dedaal isa soo taraya oo lagu dhiirigalinayao ururinta taariikhda halgankii dalka lagu xorreeyay. Waxa iyana xusid mudan in dhawaan ay ku soo biirtay boggaga internetka ee Somaliland bog lagu ururiyo taaiikhda Somaliland oo la yidhaa www.halganews.com.
The views published here are solely those of its authors (London (Jam) - from www.jamhuuriya.info) and do not necessarily reflect those of REDSEA-ONLINE.COM.